SomaliTalk.com » 2009 » October » 21
Home » Archive Maalinta October 21st, 2009
Qisadii Nabi Muuse iyo Khadir |Q-2aad
Qeybtii koowaad ee qormadaan waxaan ku soo bandhignay qisadii nabi Khadir iyo nabi Muuse oo aynu af soomaali ku tarjumnay. Qeybta labaadna waxaan ku soo qaadaynaa qayb ka mid ah faa’iidooyinka iyo cibrooyinka inoo ku sugan qisadaan qiimaha badan. Qisada waxaa ku jira cilmi iyo faa’iido badan oo aan hal maqaal lagu soo koobi Karin; sidaa darteed waxaan ka dhigaynaa labo qaybood, isla markaasna si...
Ra’iisul wasaaraha dawladda DFKMG oo Wareysi gaar ah siiyay Telefishinka Aljazeera
RA’IISUL WASAARAHA DAWLADDA FEDERALKA KMG EE SOOMAALIYA, MUDANE DR. CUMAR CABDIRASHIID CALI SHARMARKE OO WAREYSI GAAR AH SIIYAY TELEFISHINKA ALJAZEERA waxaa diyaariyay xafiiska afhayeenka dawladda federaalka kmg soomaaliya mogadishu, oct. 21 2009 — siyaasadda dawladda ee dib u heshsiinta waa lagu guuleystay oo qaybo ka mid ah mucaraadka waxaa lala gaaray muwaafaqo inkasta oo ay jiraan qayb...
Xildhibaan Maxamed Cabdi Afey oo wada olole uu ku doonayo in magdhaw lagu siiyo dadkii ku waxyeeloobay dhibaatooyinkii ka dhacey NFD-dii todobaatameeyadii.
Halkan ka dhegeyso warka oo uu akhrinayo Saciid Anteeno (mp3) Xildhibaan Maxamed Cabdi Afey oo ka tirsan baarlamaanka Kenya ayaa wada olole uu ku doonayo in magdhaw lagu siiyo dadkii ku waxyeeloobay dhibaatooyinkii ka dhacey NFD todobaatameeyadii. Xildhibaanka oo u waramayey Star FM ayaa sheegay iney doonayaan baarlamaanka iney hor geeyaan sharci xad gudub ku ah ummadda gobolka ku nool iyo ummadda...